(Emelitere ikpeazụ On: 15/02/2020)
Ị maara na Netherlands nwere otu nke kasị ukwuu Chinese obodo ke Europe? Anyị na-eche na kwesịrị nnọọ a ntụpọ na anyị n'elu 10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche na Netherlands! Ha predominantly ebi Amsterdam, Rotterdam na The Hague, bụ nke a nso nke ihe adia na Chinese New Year. na Amsterdam, isi oche Square na Nieuwmarkt / Zeedijk ịhụ dragon parades, ọdụm egwú, na ezimezi oku. I nwekwara ike ịga pụrụ iche eme na De Bijenkorf ngalaba ụlọ ahịa, tinyere calligraphy noo, music arụmọrụ na tii na-eme ememe, ma ọ bụ na Buddha temple utari Guang Shan Ọ Hua.
The ụbọchị bụkwa banyere nri, na na Amsterdam, i nwere ike iri tọrọ ụtọ nri n'okporo ámá mgbe ahịa, n'Oké Osimiri Obí (Europes mbụ sere n'elu Chinese restaurant) ma ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ tinyere Stormsteeg na Geldersekade. Na Hague, ị ga-ahụ Chinese ememme na atrium nke n'ụlọ ezumezu obodo ma na Den Haags Chinatown gburugburu Wagenstraat. Ị nwere ike ịchọta ihe ndị dị na Rotterdam eduga Chinese New Year, topped oyi site na a ụbọchị nke ememe gburugburu Chinese wijkpark na Old West na Westkruiskade Chinatown. Ọ bụrụ na ị bụ nkwenkwe ụgha, na Chinese New Afọ Eve eri a raw azụ salad (YU sheng) ime ka jisie ma ọ bụ fai hai, a ụdị ahịhịa mmiri, maka ọganihu. Gong XI Fa cai! (Ezi afọ ọhụrụ!)
Ọ bụrụ na ihe omume pụrụ iche na Netherlands na-agụnye free nri, i nwere ike ịgụ m na! na 50% anya, ọ bụ ihe fọrọ nke a na-ezu ohi! Gaa na nke a Dutch ememme maka foodies, where you can dine in some of the top restaurants in the Netherlands for crazy discounts.
Otu n'ime ndị kasị ihe omume pụrụ iche na Netherlands, ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu n'ime ndị kasị fun na jupụtara, bụ On eze Day, which bụ King Willem Alexanders ụbọchị ọmụmụ. Dutch obodo nọrọ n'ụlọ n'okporo ámá ọzọ, àkpịrị ahịa, na-eme ihe, mbịne dum nke Netherlands n'ime nnukwu ememme nke afọ. I nwere ike maa tinye a ka otu n'ime ndị kasị ihe omume pụrụ iche na Netherlands! People gaba usọrọ, egwu music, ejiji na oroma ma nwee gburugburu ọma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị jupụtara, oge. Eze Night na-eme ememe n'abalị ahụ tupu Eze Day, na anụ ndị ọzọ na obodo emmepe-adọta ìgwè mmadụ si kilomita gburugburu.
Ò nwetụla mgbe ị àmà a itoolu mita ogologo n'elu mmiri, kpuchie na okooko osisi na gliding site na n'okporo ámá, kwadoro site na ihe ọ bụla ma manpower? Ọfọn, unu na-! ifuru Zundert na-kasị ifuru Nme na ụwa kpamkpam mere site ndị ọrụ afọ ofufo. Kwa afọ ọ bụla hamlet na-agba mbọ iru ihe ndị kasị mma n'elu mmiri ya mgbe ọ bụla wuru. Gaa na nke a pụrụ nnọọ iche omume na Zundert dị ka ị ga-bụkwanụ. Corso Zundert bụ ihe niile banyere ịhụ na, na na, ikwere!
N'agbanyeghị fun mma na ọtụtụ ndị ọzọ, Leidens Ontzet bụ a ememe na ọtụtụ omenala na akụkọ ihe mere eme pụtara. N'ụtụtụ nke atọ October amalite na reveille na n'ụlọ ezumezu obodo. Free azụ asa na-acha ọcha achịcha na-ahụ nyere si na Leiden Waag. Ị nwere ike mgbe ahụ na-enwe a musical nzukọ na Van Der Werf park na ọrụ ke Pieterskerk. Na mgbede ndị mmadụ omenala eri a karọt na yabasị ya ofe akpọ Hutspot. The ememe akwụsị na-akwa firework show.
Ụgbọ mmiri omenala amalite na Nme: ọtụtụ narị ụgbọ mmiri na-akwọpụ n'ime IJ na-etolite a pụrụ iche n'anya nke ị ga-echefu. Na ndị na-esonụ ụbọchị, ọtụtụ ọkụ na mmiri na-ahụ ebe, na nsonye Skutsjesilen(ụgbọ na a typical Frisian ship). The Royal Netherlands Navy ga-egosipụta nkà ha na mmiri.
Special campsites, ọnụ maa ụlọikwuu, , maa ụlọikwuu na anụ kwere omume na Netherlands n'oge Tenting Days (Site gị tent). The nzukọ nke Tenting Days akwado ọtụtụ mmekọ. Ya bụ; maa ụlọikwuu Sites, ndị Society maka ichebe Natural ncheta na Netherlands, nakwa dị ka ohia Commission. Ị na-nyere ohere mara ụlọikwuu na ndị kasị akpali, ọnụ ala ma na ọhịa ebe nke Noordoostpolder. Ọ bụkwa ibu fun n'ihi na ndị okenye na ụmụaka myiri!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche Na The Netherlands” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/special-events-netherlands/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)